Mpandraharaha fitsangantsanganana ao Tanzania dia mamono olona 150 tapitrisa amin'ny ady amin'ny famonoana olona
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Tanzania » Mpandraharaha fitsangantsanganana ao Tanzania dia mamono olona 150 tapitrisa amin'ny ady amin'ny famonoana olona
Associations News • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Crime • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • tompon'andraikitra • Vaovao Mafana Tanzania • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Zahao ny fampisehoana nataon'ny Tanzania Tour Operators
Ireo mpilalao mpizahatany ao Tanzania dia nanaparitaka volafotsy an-tapitrisany maro ho ao anaty programa iray miady amin'ny famonoana poizina izay natao hiarovana ny lovan'ny biby any Afrika any amin'ny Valan-javaboary Serengeti.
Ny lemaka midadahin'i Serengeti dia misy savannah 1.5 tapitrisa hektara.
Izy io dia mitazona ny fifindra-monina lehibe indrindra tsy miova misy wildebeests 2 tapitrisa miampy gazela sy zebra an'arivony.
Izy ireo rehetra dia manao diabe mihodidina ny 1,000 kilometatra isan-taona mandritry ny firenena 2 mifanakaiky amin'i Tanzania sy Kenya, arahin'ireo mpiremby azy ireo.
Eo ambany fiahian'ny Fikambananan'ny Tour Operations (TATO) ao Tanzania, nandany vola 150 tapitrisa shillings (65,300 XNUMX Dolara amerikana) ny mpampiasa vola fizahan-tany mba hanamafisana ny programa mandroritra, hampiakatra ny fanoloran-tenan'izy ireo amin'ny ady feno rà amin'ny fanoherana mangalatra nefa mahafaty. ao amin'ny Serengeti.
Ny sekretera maharitra misahana ny harena voajanahary sy ny minisiteran'ny fizahantany, Dr. Allan Kijazi, dia nilaza fa ny fivelaran'ny fihazana olona noho ny fahantrana dia nihanala moramora tamin'ny asa lehibe sy ara-barotra, nametraka ny valan-javaboary tanzania Serengeti voalohany teo ambany fanerena taorian'ny 5 -taona maimbo.
Ity endrika fanadinadinana adino ity izay tompon'andraikitra tamin'ny famonoana biby marobe tany Serengeti dia nanosika ireo mpiaramiasa fizahan-tany hiditra sy hamorona programa manelingelina amin'ny tapaky ny volana aprily 2017, eo ambanin'ny maodelim-bahoaka-Private fiaraha-miasa (PPP) mahatafiditra Tanzania National Parks (TANAPA) , Frankfurt Zoological Society (FZS), sy ny tenan'izy ireo.
Ny fanomezana ny takelaka Sh150 tapitrisa avy amin'ny TATO mankany amin'ny FZS, amin'ny fanatanterahana ny fandaharan'asa fandringanana, ny Minisitry ny harena voajanahary sy ny fizahantany, Dr. Damas Ndumbaro, dia nidera ireo mpandray anjara tamin'ny fametrahana ny volany teo am-bavany.
“Misaotra fatratra amin'ny TATO aho noho ity hetsika tsy mampino hanohanana [ity] fiara fanoherana ny fikomiana. Ity hetsika ity dia hiantoka ny fiarovana ny valan-javaboary malalantsika sy ny bibidia sarobidy ao anatiny, ”hoy ny Dr. Ndumbaro. Nivoady izy fa hiara-hiasa amin'ny TATO amin'ny fampiroboroboana ny asa fiarovana sy fampandrosoana ny indostrian'ny fizahantany.
Ny filohan'ny TATO, Andriamatoa Wilbard Chambullo, dia nilaza fa talohan'ny valan'aretina COVID-19 dia nampiasa vola an-tsitrapo ny mpandraharaha mpizahatany iray dolara azony isaky ny mpizahatany, saingy noho ny onjan'ny areti-mifindra dia voatery nanidy ny fotodrafitrasan'izy ireo ny mpampiasa vola ary nandefa ny mpiasa rehetra ao an-trano.
Tao anatin'ny ezaka mafy nataony mba hivelomana dia niorina ny TATO, eo ambany fanohanan'ny Firenena Mikambana momba ny fampandrosoana (UNDP) fotodrafitrasa ara-pahasalamana toy ny foibe fanangonana santionany COVID-19 ao Seronera sy Kogatende ao Serengeti izay nanoloran'ny fikambanana Sh40, 000 ary Sh20,000 sarany isaky ny santionany avy amin'ny mpikambana TATO sy ireo tsy TATO.
"Izahay, tao amin'ny TATO, dia niara-nanapa-kevitra ny hanome ny vola nangoninay avy amin'ireo foibe fanangonana santionany COVID-19 mba hanamafisana ny programa fandrahonana," hoy Andriamatoa Chambullo, tao anatin'ny tehaka nataon'ny mpanatrika.
Ny zava-bita, anisan'ny antony hafa, dia nety noho ny fiaraha-miasa telo izay iray teo amin'ny UNDP, TATO, ary ny governemanta tamin'ny alàlan'ny Ministeran'ny harena voajanahary sy ny fizahantany ary koa ny minisiteran'ny fahasalamana.
“Faly be aho fa ny vola omentsika anio ho an'ny fandaharan'asa fandringanana dia anisan'ny… dingana lehibe amin'ny fiaraha-miasantsika amin'ny UNDP, TATO, ary ny Ministeran'ny harena voajanahary sy ny fizahantany, ary koa ny Ministeran'ny fahasalamana , amin'ny fanamafisana ny fanarenana ny fizahan-tany any Tanzania, "hoy ny Tale jeneraly TATO, Andriamatoa Sirili Akko.
Ny De-snaring Program, ny voalohany amin'ny karazany nampiharina avy amin'ny FZS - fikambanana iray mpiaro ny tontolo iainana fanta-daza manana traikefa 60 taona mahery - dia natao hamongorana ireo vela-pandrika apetraky ny mpihaza hena any an-toerana hamandrihana ireo biby dia ao anatin'ny Serengeti sy mihoatra.
Raha ny fanehoan-kevitra, ny talen'ny firenena ho an'ny Fikambanana Zoolojika any Frankfurt, Dr. Ezekiel Dembe, dia naneho fankasitrahana ireo mpandraharaha mpizahatany noho ny fampidirana ny fiheverana ny fiarovana azy ireo ho maodelin'ny orinasan'izy ireo.
“Fitsipika vaovao ho an'ny vondron'orinasa ataontsika ny mandray anjara amin'ny fivezivezena amin'ny fiarovana. Ny teny filamatray nandritra izay 60 taona lasa izay dia hisy ary tsy hisy intsony, Serengeti tsy ho faty mandrakizay, ary faly aho fa manatevin-daharana ny ezaka ataonay ireo mpandraharaha mpizahatany ankehitriny, ”hoy ny fehin'i Dr. Dembe.
Nanomboka tamin'ny tapaky ny volana aprily 2017, ny programa de-snaring dia nahomby tamin'ny fanesorana ny fandrika tariby 59,521, izay namonjy 893 biby dia hatramin'izao.
Ny fandalinana FZS dia nanondro fa ireo fandrika tariby dia tompon'andraikitra tamin'ny famonoana biby marobe 1,515 tao amin'ny valan-javaboary Serengeti tamin'ny aprily aprily 2017 hatramin'ny 30 septambra 2021.
Raha vantany vao nanjary goavana sy varotra ny fikaroham-bola tany Serengeti, dia nisedra tsindry nohavaozina ny valan-javaboary afrikanina mba hamahana ny olana taorian'ny fihomehezana naharitra 2 taona. Bibidia any Serengeti, tranokalan'ny World Heritage, dia nanomboka sitrana tamin'ny andrana fihadiana ivoara nandritra ny folo taona, izay saika nandohalika ny vahoaka elefanta sy ny rhino.
Ny Institut Tanzanian Wildlife Research Institute (TAWIRI) dia nanao ny «Fanisam-bato lehibe ho an'ny elefanta lehibe» tao anatin'ny ekosistema manan-danja 7 nanomboka ny volana Mey ka hatramin'ny Novambra 2014 rehefa fantatra fa namono ny 60 isan-jaton'ny elefanta tao anatin'ny 5 taona monja ny "balan'ny mpihaza".
Raha ny tarehimarika marina dia nanambara ny valin'ny fanisam-bahoaka fa ny isan'ireo elefanta tanzania dia nidina hatramin'ny 109,051 tamin'ny 2009 lasa 43,521 fotsiny tamin'ny taona 2014, maneho ny fihenan'ny 60 isan-jato nandritra ny vanim-potoana dinihina.
Ny tena antony nahatonga an'io fihenam-bidy io dia ny fiakaran'ny vidim-piainana tany amin'ny faritra voafehy sy malalaka, izay nitolona tamin'ny fifandonana tanzania tato ho ato na dia tsy ampy aza ny enti-manana sy ny haitao.
Toy ny hoe tsy ampy izany, ny fihinana henan'ala any an'ala Serengeti izay mety ho adino sy mangina nefa mampidi-doza indrindra amin'ny fifindra-monina isan-taona manerana ny lemak'i Afrika Atsinanana.